မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး China Manufacturer
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ MC- အမျိုးအစားအိတ်စိစစ်မှုများ,MC အမျိုးအစား Pulse Baghouse,Iron Ore သံသတ္ထုကောက်ခံရေး
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဘိလပ်မြေစက်ရုံ MC- အမျိုးအစားအိတ်စိစစ်မှုများ,MC အမျိုးအစား Pulse Baghouse,Iron Ore သံသတ္ထုကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > သွေးခုန်နှုန်း Deduster > မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး
 မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး
1. သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကအုပ်စုခွဲအခန်းထဲမှာ Pulse ကိုအသုံးပြုသည်သမရိုးကျသွေးခုန်နှုန်း duster နှင့်အခန်းထဲကပြန်ထိုးနှက် deduster များ၏ချို့ယွင်းချက်ကိုကျော်လွှားရန်နည်းပညာကိုသန့်ရှင်းရေး pulsate ။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့သန့်ရှင်းရေးနိုင်စွမ်းကိုမြင့်မားဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု, အနိမ့်ထုတ်လွှတ်အာရုံစူးစိုက်မှု, အသေးစားလေကြောင်းယိုစိမ့်မှုနှုန်းနည်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသံမဏိစားသုံးမှုနည်းသောဧရိယာ, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ဒါဟာသန့်စင်ခြင်းနှင့်သတ္တုဗေဒ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဘိလပ်မြေ, စက်ပစ္စည်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပါဝါနဲ့အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်နာလန်ထူဘို့သင့်လျော်သည်။
2. ကြောင့်ပြာမှုတ်ဖို့လေသွေးခုန်နှုန်းဆုတ်နှင့်ပြာများမှုတ်၏အသုံးပြုမှုကို၎င်းထိုသို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တခါပြာသန့်ရှင်းရေး၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏ကာလကြာရှည်သည်ပြာရှင်းလင်းခြင်းများ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချသည်နှင့်လေကောင်းလေ ဖိအားစားသုံးမှုကိုအလွန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း filter ကိုအိတ်နှင့်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဒီဂရီအရှင် filter ကိုအိတ်နှင့်အဆို့ရှင်အပိုင်းအစ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုမပွားများ, correspondingly လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
3. ကို Maintenance နှင့်အစားထိုးအိတ်စဉ်ဆက်မပြတ် system ကိုမှုတ်တံနှင့်စနစ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်၏အခြေအနေအောက်မှာအိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအိတ်အိတ်ပါးစပ်ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် elastic တိုးချဲ့လက်စွပ်ချမှတ်။ အဆိုပါ filter အိတ် Keel, အိတ်နှင့် Keel အကြားပွတ်တိုက်အားကိုလျော့နည်းစေသည့်အိတ်၏ဘဝအသက်တာရှည်, နှင့်အိတ်ချဘို့အဆင်ပြေသောအနားဖြစ်ပါတယ်။
4. အထက်အိတ်မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ အိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်အိတ်ထုတ်ထားနှင့်ညစ်ပတ်ပေရေအိတ်ဟာ box ရဲ့အောက်ဆုံးပြာ Hopper တွေလည်းထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဟောင်ကောင် Chu ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အိတ်ပြောင်းလဲများ၏စစ်ဆင်ရေးအခွအေနေတိုးတက်လာနေပါတယ်။
5. အဆိုပါ box တင်းကျပ်စွာ, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်, စစ်ဆေးရေးတံခါးသည်ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရေနံဆီနှင့်အတူယိုစိမ့်ထောက်လှမ်းနှင့်အနိမ့်ယိုစိမ့်မှုနှုန်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
6. ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်လေကြောင်းပြွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်နှင့် Airflow ခုခံသေးငယ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > သွေးခုန်နှုန်း Deduster
စက်မှုအလုပ်ရုံဖုန်မှုန့် Processor ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဘိလပ်မြေစက်ရုံ MC- အမျိုးအစားအိတ်စိစစ်မှုများ , MC အမျိုးအစား Pulse Baghouse , Iron Ore သံသတ္ထုကောက်ခံရေး , လေမှုတ်စက် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းစီးရီး Bag-type အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ဆိုက်ကို Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , မြို့ပတ်ရထားဂျက်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး